ထီ App | Lottery.com
သင်၏ဖုန်းတွင်ထီကစားပါ။ ပြည်နယ်ဂိမ်းများ၊ ထီရလဒ်များနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများအတွက်နံပါတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပ်ဖြင့်ခံစားပါ
NOW က PLAY or
အဆိုပါထီ Play စေရန်တစ်ဦးက သာ. ကောင်း၏ Way ကို
သင်တို့သည်ငါတို့၏တိုက်ရိုက်ပြည်နယ်များတတယ်ဆိုရင်သင် Lottery.com app ကို အသုံးပြု. ညာဘက်သင့်မိုဘိုင်း device မှအစစ်အမှန်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး၎င်း၏နောက်တွင် Powerball နှင့် Mega သန်းနဲ့ချီကစားနိုင်ပါတယ်။
သင်၏ဖုန်းတွင်ထီကစားခြင်းသည်လွယ်ကူပါသည်။ သင်၏အကောင့်ကိုသတ်မှတ်ပြီးအချိန်အတွင်းကစားပါ။ jackpots များများများနေချိန်တွင်လည်းကစားရန်သင့်အားသတိပေးနိူင်သည်။
Lottery.com အကောင်းဆုံးနဲ့လုံခြုံမှုအရှိဆုံးမိုဘိုင်းထီအတွေ့အကြုံကိုပေးစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုစစ်ဆေးပေးတယ်ကြောင်းနည်းပညာ, အသက်အရွယ်, နှင့်တည်နေရာအသုံးချဖို့လုံခြုံရေးအရသေချာ။
သငျသညျအနိုင်ရသည့်အခါအားလုံးသင့်ရဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့, အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့လုံလုံခြုံခြုံ, သင့်ဘဏ်အကောင့်မှလက်ျာဘက်လက်သို့အပ် Get! သင်သည်သင်၏အနိုင်ရရှိတဲ့များ၏ 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုစောင့်ရှောက်!
mega သန်းနဲ့ချီနှင့်ရပ်တည်ခဲ့ပြီး၎င်း၏နောက်တွင် Powerball ကျနော်တို့တိုက်ရိုက်လွှရှိရာပြည်နယ်များအတွက်ကစားဘို့အမရရှိနိုင်များမှာ! သင်တို့သည်လည်းအခြားအထီဂိမ်းရာပေါင်းများစွာအဘို့, ကအနိုင်ဂိုးနံပါတ်များကိုရှုမြင်ရက်စွဲများဆွဲခြင်း, ထီပေါက်စုစုပေါင်းနိုင်ကြသည်။
သင့်ရဲ့ Lucky နံပါတ် Pick
သင့်ရဲ့ကံကောင်းဂဏန်း Play သို့မဟုတ်သင့်နံပါတ်များကိုသင်တို့အဘို့ထုတ်လုပ်ပြီးရှိသည်။
တစ်ကြိမ် 20 လက်မှတ်များအထိဝယ်ယူအသုံးပြုပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏လက်မှတ်များများ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သင်ကအနိုင်ရသွားပါတယ်လျှင်သင်အကြောင်းကြားမယ်!
သင်သည်သင်၏အနိုင်ရရှိတဲ့များ၏ 100 ရာခိုင်နှုန်းကိုစောင့်ရှောက်! သင်ပိုမိုလက်မှတ်တွေ play တစ်ခုသို့မဟုတ် cashout တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့သင့်ရဲ့ဟန်ချက်နေပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကြီးတွေထီပေါက် hit ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ $ 600 ကျော်အနိုင်ပေးများအတွက်အခွန်တာဝန်ယူမှုပါဝင်သော, သင်ဆက်သွယ်ပါနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
"ဒီ app ကိုငါအရမ်း ၀ မ်းသာနေတယ်။ ရလဒ်တွေအတွက်တိုက်ရိုက်သတိပေးချက်တွေရတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုရှာဖို့မကြိုးစားတော့ဘူး။ jackpot သတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းငါသတိပေးချက်တွေရနိုင်တယ်။ "
"ကျွန်မလပေါင်းများစွာဒီ app ကိုသုံးပြီးကထွက်အဲဒီမှာအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းထီ-စစ်ဆေးခြင်းကို applications များထဲကတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြရတယ်။ "
"သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဒီတော့အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ကျွန်မမေးဖို့တစ်စုံတစ်ရာ, သူတို့ကလျင်မြန်စွာဖြေကြားခြင်းနှင့်ငါ့အဘို့ရှင်းလင်းစွာအရာအားလုံးရှင်းပြပါ။ ဤမျှလောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
"ဒီ app ဟာထီကစားသူတွေအတွက်တကယ်သင့်တော်ပါတယ်။ အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်အများကြီးသက်သာစေတယ်။ အွန်လိုင်းလက်မှတ်တွေကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်ပြီးရလဒ်များကိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည်။ "
Playing Start ရန်အသင့်ဖြစ်ပြီလား?
App Store မှာသို့မဟုတ် Google Play Store အားအတွက် Lottery.com app ကို download လုပ်ပါ။ အချိန်လေးအတွင်းမှာကစားစတင်ရန်သင့်အကောင့်ကို set up!
ဇူလိုင်လ 10, 2020 အတွက်နံပါတ်များအနိုင်ရရှိ
ဇူလိုင်လ 11, 2020 အတွက်နံပါတ်များအနိုင်ရရှိ
Power က Play စ: 2X
ဇူလိုင်လ 09, 2020 အတွက်နံပါတ်များအနိုင်ရရှိ
ကျနော်တို့မကြာခင်ပိုပြီးပြည်နယ်များအတွက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်လိမ့်မယ်! ကျနော်တို့သေးအသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်မဟုတ်ရှိရာပြည်နယ်များရှိကစားသမားများနေဆဲရလဒ်များကို, ထီပေါက်အရွယ်အစားနှင့်အသတိပေးချက်အရ, နှင့် app ထဲတွင်စက္ကူရပ်တည်ခဲ့ပြီး၎င်း၏နောက်တွင် Powerball နှင့် Mega သန်းနဲ့ချီတဲ့လက်မှတ်တွေကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ပြန်ကြားရေး တာဝန်ရှိဂိမ်းကစားခြင်း နှင့်ပြဿနာဂိမ်းရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ် 1-800-522-4700 ခေါ်ဆိုပါ။
အဆိုပါ Lottery.com App ကိုရယူပါ
ရပ်တည်ခဲ့ပြီး၎င်း၏နောက်တွင် Powerball နံပါတ်များ
Lottery.com သည်သင်၏အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။